Hermès အိတ် ၂၀၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Jamie Chua ၏ ဘဝအကြောင်း – FemaleWear.net
Hermès အိတ် ၂၀၀ ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Jamie Chua ၏ ဘဝအကြောင်း
Jamie Chua ဆိုတာကတော့ Bonkers Closets ရဲ့ Facebook page ကနေ တင်လိုက်တဲ့ video ကြောင့် ကြည့်ရှု့သူ 33 Millions ကျော်သွားပြီး နိုင်ငံတကာမှာ လူသိများသွားတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Chua ကတော့ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် Singaporean အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ ကလေး ၂ယောက်ရဲ့ မိခင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ Cleveland က အသက် ၂၅ ဝန်းကျင်ရှိနေပြီး သမီးလေး Calista ကတော့ အသက် ၂၀ ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသား multi-millionaire Nurdian Cuaca ဆိုသူနဲ့ ကွာရှင်းထားပြီး လစဉ်ထောက်ပံ့ငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ 450,000 ရရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးချိန်မှာတော့ $93Millions ကျော်ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ သူမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ငွေစုစုပေါင်း $80 Millions လောက် ဖြစ်ပါတယ်။
???With roses that bloom for me all year round, everyday is Valentine’s Day baby!!!
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 27, 2018 at 6:48pm PST
????Soaking up every bit of these relaxed mornings while breakfast awaits. Now would someone bring me my coffee please.
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 26, 2018 at 6:23pm PST
သူမအိမ်ထောင်မကျခင်အချိန်က Singapore Airline တစ်ခုရဲ့ Bussiness class မှာ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၃နှစ်ကြာပြီးနောက် တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့ကြရာ အိမ်ထောင်သက် ၈နှစ်ကျော်ကြာထိ ပေါင်းဖက်လိုက်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
Searching for my next LoHei location. Can’t go wrong doing the classic black and gold for CNY.
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 24, 2018 at 12:31am PST
☀Sun’s out and the heat wave is back. ⛱? Time to stay cool by the pool. With all that CNY feasting happening for the last week, I’m really looking forward to my @lasourcespa body contouring treatment to whip my body back into shape before my next resort vacay. And best of all, they have extended their 30 days Body/Face Reboot package to includeafree 1st Trial! So give @lasourcespaacall to get more details. #jamiechuaxlasource
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 22, 2018 at 12:11am PST
သူမရဲ့ Social Media ဖြစ်တဲ့ Instagram မှာတော့ perfect life ပုံတွေ အမြဲတင်လေ့ရှိပြီး ယခုလက်ရှိ Followers 660K ထိ ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယာက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Hermès အိတ်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Victoria Beckham တောင် Hermès အိတ်တွေ သူ့လောက်ပိုင်ဆိုင်မထားပါဘူး။ ယခုလက်ရှိမှာတော့ Chua ဟာ Hermès အိတ် ၂၀၀ ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Jan 13, 2018 at 12:43am PST
Matchy with Misha in GOLD. Today is 【初七人日】??According to Chinese customs, it’s the day when human beings were created and therefore we celebrate everyone’s birthday on this day. 祝大家人日快乐!
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 21, 2018 at 7:59pm PST
?Good morning! Your trusty orange box delivery girl is on her way.?
အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိသူမနဲ့တွဲနေတဲ့ boyfriend လည်းနေရှိပါတယ်။ သူတို့ couple ရဲ့ ပုံတွေကိုတော့ သူမရဲ့ instagram မှာ မကြာခဏဆိုသလို တင်လေ့ရှိပြီး Chua ပြောပုံအရတော့ သူဟာကလေးနှစ်ယောက်အပေါ်မှာ ဖခင်အရင်းတစ်ယောက်လိုတင်မက မိခင်တစ်ယောက်လိုပါ နွေးထွေးမှုရှိပြီး မားမားမတ်မတ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း Media တစ်ခုမှာ ဖြေထားပါသေးတယ်။
?He asked me if I would like to travel the world with him onaBMX, I told him I can’t cycle.? Happy Valentine’s my ♥ @terrorkks
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Feb 13, 2018 at 6:28pm PST
?What goes around comes around. #theluminousonegoestohongkong
A post shared by ♡ ᒍᗩᗰIE ᑕᕼᑌᗩ ♡ 蔡欣颖 (@ec24m) on Jan 4, 2018 at 7:35pm PST
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Chua ရဲ့လက်ရှိဘဝအကြောင်း စုံစုံလင်လင်ပြီဖြစ်လို့ အားလုံးလည်း ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ နောက်ရက်တွေမှာလည်း သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ skin care brand အကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့အသားရေထိန်းသိမ်းပုံအကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားအုံးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအုံးလို့….
Tags: Hermès, Jamie Chua
Gucci ရဲ့ Runway Show ကို လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြတဲ့ #GucciChallenge
အလန်းစား Boots Style တွေကိုချပြလိုက်တဲ့ Jeffreycampbell